यी हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकी एकमात्र छोरी, जो यति शक्तिशाली छिन् ! – Khabar Silo
यी हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकी एकमात्र छोरी, जो यति शक्तिशाली छिन् !
एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरीको नाम हो सी मिंङजे । उनको जन्म सन् १९९२, जुन २७ सिचुआन प्रान्तको फ्यानियनमा भएको थियो । उनकी आमा एक प्रसिद्ध लोक गायिक हुन्। उनी २००६ देखि २००८ सम्म हाङजोङ फरेन ल्याङवेज स्कूलमा पढिन् र अन्य विषयहरूमध्ये फ्रान्सेली भाषा सिकिइन् । उनी झेजियांग विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन् र आफ्नो स्नातकको अध्ययनको लागि करीव एक वर्ष खर्च गरिन्।
सन् २०१० मा उनलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालय, म्यासाचुसेट्स, उपनाममा मनोविज्ञान र अंग्रेजी पढ्न पठाइएको थियो। उनले मे २०१४ मा आफ्नो स्नातक पूरा गरिन् र पछि चीन फर्किइन्। हाल उनी बेइजिङमा बस्छिन्। किशोरावस्थादेखि नै विभिन्न परोपकारितामा संलग्न रहेर उनले काम गर्दै आइरहेकी छिन् । जुलाई २००८ मा चिनियाँ समाचार प्रकाशनको रडारमा आइन् । त्यति बेला उनी केबल १६ वर्षकीमात्र थिइन् ।
उनले १२ मे सिचुआन भूकम्प राहतका लागि काम गरिन् ।उनको आमाले पीडितको समर्थनमा एउटा कार्यक्रम गरिरहेकी थिइन् । जब उनले एक स्वयंसेवी आवेदन पेस गरिन् र उनको स्कूलको अनुमति लिएर भूकम्प गएको केही दिन पछि हजारौं बेइजिङ स्वयंसेवकहरूसँग भूकम्प प्रभावित इलाका भ्रमण गरिन् । उनका बुबाले नोभेम्बर २०१२ मा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव बनेको एक हप्ता पछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यानाकर्षण गरिन्।
युकेको ‘द मेल’ ले पहिलो पटक नोभेम्बर १, २०१२ मा खबर गरेको थियो कि उनी हार्वर्डमा गुप्तरूपमा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। पश्चिमी संस्कृतिको प्रशंसक शी जिनपिङले आफ्नी छोरीलाई सन् २०१० मा हार्वर्डबाट स्नातक पूरा गर्न संयुक्त राज्य पठाएका थिए । उनी त्यहाँ अध्ययन गरिरहेकी थिइन् भन्ने तथ्यलाई गोप्य राखिएको थियो । उनीबारे जान्ने केवल १० जना मात्र सीमित थिए। संकाय र घनिष्ठ मित्रहरूको संख्या, उनको वास्तविक पहिचानको बारेमा जान्दैन्थे ।
एजेन्सी– अष्ट्रेलियाका धनाढ्य म्याथ्यु लेपरले आफ्नो सामाजिक सन्जालमा एउटा जागिरका लागि विज्ञापन गरेका छन् । २६ वर्षका यी धनाढ्यलाई चाहिएको छ, एकजना यस्ता सहयोगी जो हर समय उनीसँगै घुमघाममा निस्किउन् । र, त्यसका लागि उनले प्रस्ताव गरेको तलब हो– ५२ हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात् करिब ४० लाख रुपैयाँ नेपाली । म्याथ्यु इकमर्स व्यवसायका मालिक हुन् […]
ट्वीटरले ट्रम्पको ट्वीटमा लगाइदियो चेतावनीको चिन्ह, ट्रम्पले भने- वाक स्वतन्त्रताको हनन् भयो
माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्वीटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको केही ट्वीटहरूमा पहिलोपटक ‘फ्याक्ट-चेक’ चेतावनी राखिदिएको छ। ट्वीटरले मंगलबार ट्रम्पका दुईवटा ट्वीटमा यस्तो चिन्ह लगाइदिएको हो। ट्वीटरले ट्रम्पको मेल-मतपत्रलाई ‘कपटपूर्ण’ भनेको र ‘मेलवक्स लुटिनसक्छ’ भन्ने चेतावनीको वाक्यांश भएका ट्विटमा चेतावनीको चिन्ह लगाइदिएको हो। ट्वीटरको यो कदम ४५ अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको ताका ट्वीटहरूमा कुनै पनि सामुदायिक निर्देशनहरू लागु […]
एजेन्सी । कोरोना भा’इरसको म’हामा’रीमा हर क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । कामकाज, सरसफाइदेखि लिएर खानपिनसम्म विभिन्न परिवर्तन भएको छ मानिसको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र खासगरी खानपिन अनि स्वच्छताको मुद्या एक्कासि धेरै माथि आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरक्षित खानपिनको लागि पाँच टिप्स बताएको छ । जसको बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। सधैं सफा रहौँ –खाना बनाउनुभन्दा […]
सि जिङपिङ फर्किएकै दिन प्रचण्डले गरे खतरनाक घोषणा, ओलीलाई तनाव !